September 2018 « A.S.M.A
79th Anniversary Celebration to Ven Ottama, The Light of Asia at M.C.U.
8 . 9. 2018
The 79th Anniversary Celebration of The Most. Ven. Ottama, The Light of Asia, The Pioneer Sayadaw of Myanmar Independence Struggles conducted by Arakan Student Monks Association (A.S.M.A) at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand on 8. 9. 2018 (Saturday).
The Representative of All Ethnics including Burmese particularly took part in the Ceremony.
The pamphlet of Ven Ottama’s honorable biography were contributed to all Attendees.
President of A.S.M.A warmly welcome all the representatives of Invited ethnics :
(1) Mon Buddhist Students Society M.C.U.
(2) Myanmar Monk Students Organization.
(3) Dawei National Development Association (DNDA)
(4) Wa Students Organization in Thailand
(5) Danu Student Monks Association (Thailand)
(6) Tai Sangha University Students’ Association (TSSA)
(7) United Pa.O University Students (U.P.U.S)
(8) Ta’ ang Monks Association, Thailand
(9) Khwekabaung Dana Association (Thailand) (K.D.A).
The Certificates of Appreciation for Participating in the Ceremony were presented to all of Special invitees from different ethnics.
Those who kindly cooperated on the Ceremony of The Most. Ven. Ottama Memorial Day at M.C.U. are highly appreciated.
A.S.M.A -Information (Thailand)
79th Anniversary Celebration to Ven Ottama, The Light of Asia at M.C.U
နှစ်စဉ်ကျင်းပနေကျဖြစ်သော မိမိတို့ A.S.M.A-ရခိုင်းကျေင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့(ထိုင်းနိုင်ငံ)၏ ပညာရေးရန်ပုံငွေအတွက် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ကို ယခုနှစ်တွင် နဝမအကြိမ်မြောက်အဖြစ်ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကံစမ်းမဲ(၁)စောင်လျှင် ထိုင်းဘတ်ငွေ(၁၀၀)ဖြင့် ကံစမ်းနိုင်ပါသည်။
ကံတရားသည် လူတိုင်းမမြင်နိုင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း လူတိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ကံထူးရှင်လောင်းလျာများအား မိမိတို့ A.S.M.A ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့မှ နွေးထွေးစွာဖြင့် ဖိတ်ခေါ်ကြိုဆိုလိုက်ရပါသည်။
အကြောင်းမညီညွတ်၍ ဆုကြီးများနှင့်လွဲသွားပါကလည်း မိမိကံစမ်းလိုက်သောငွေမှာ ပညာသင်ယူနေကြသောရဟန်းတော်များ၏ ပညာရေးရန်ပုံငွေအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိသွားပါမည်။ ပညာသင်ယူနေသော ရဟန်းတော်တစ်ပါးပါး၏ ကျန်းမာရေးအတွက် အကူအညီလိုအပ်လာချိန်တွင်လည်းကောင်းကျောင်းစရိတ်အခက်အခဲကြောင့် အကူအညီလိုအပ်လာချိန်တွင်လည်းကောင်း
အသင်းမှ ဦးစီး၍ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအတွက် လူမှု့ကူညီစောင့်ရှောက်ရာ၌လည်းကောင်း စတဲ့ ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် တစ်စုံတစ်ရာအထောက်အကူပြုနိုင်သည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ တစ်ပါးအတွက်မဟုတ် အများ(သံဃာ)အတွက် အကျိုးရှိနိုင်သောအလှူမျိုးကို မိမိတို့ရရှိနိုင်ကြမည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
***** ပညာဒါန ကုသိုလ်ပြု ကံစမ်းရင်း အားလုံး ကံထူးနိုင်ကြပါစေ *****
ASMA ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့ ( ထိုင်း) ။
10:48 PM Share:
"၆-လပတ် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပင့်လျှောက်လွှာ"
နေ့စွဲ ။ ၁၄ ။ ၉ ။ ၂၀၁၈
အကြောင်းအရာ။ ။ ၆-လပတ် ပုံမှန်အစည်းအဝေးပင့်လျှောက်ခြင်းကိစ္စ
ရိုသေလေးစားစွာပင့်လျှောက်အပ်ပါသည် A.S.M.A အဖွဲ့ဝင် သံဃာတ်ာအရှင်သူမြတ်တို့ ဘုရား။ ဘုရားတပည့်တော်တို့ နှစ်စဉ်ပုံမှန် ကျင်းပမြဲဖြစ်သော A.S.M.A အသင်းကြီး၏ ၂၀၁၇/၈ ၆-လပတ် သံဃာ့စုံညီအစည်းအဝေးတရပ်ကို အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ပြုလုပ်ကျင်းပမည် ဖြစ်ပါသောကြောင့် အသင်းဝင်သံဃာတော်များ၏ ညီညွတ်မှုကို ရှေ့ရှုလျက် ကြွရောက်တော်မူကြပါရန် ခြေတော်အစုံကို ဦးခိုက်လျှက် ရိုသေစွာပင့်လျှောက်အပ်ပါသည် သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ ဘုရား။
နေစွဲ ။ ၁၅ ရက် ၊ ၉ လပိုင်း ၊ ၂၀၁၈
အချိန် ။ နေ့လည် (၁၂) နာရီ မှ ညနေ (၄) နာရီထိ
နေရာ ။ Zone - C . Underground Room , မဟာချူလာလောင်ကွန်း
တက္ကသိုလ် ၊ အာယုဒ္ဓယ ။ ထိုင်းနိုင်ငံ ။
(A.S.M.A - ဗဟိုကော်မတီ )
၆-လပတ် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပင့်လျှောက်လွှာ
10:45 PM Share:
Arakan Student Monks Association, Thailand (ASMA)၏
(၆) လပါတ်အစည်းအဝေးကျင်းပ ။
၁၅ ရက် ၊ ၉ လပိုင်း ၊ ၂၀၁၈
Arakan Student Monks Association, Thailand (ASMA)၏ (၆) လပါတ်အစည်းအဝေးကို ၁၅. ၉ .၂၀၁၈ စနေနေ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ မဟာချူလာလောင်ကွန်းတက္ကသိုလ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
အစည်းအဝေးတွင် နာယကဆရာတော် ဦးပညာသာရဗောဓိမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာမှာ......
(၂) အခက်အခဲများရှိပါကလည်း ညီအစ်ကို စိတ်ဓာတ်ဖြင့် စည်းစည်းလုံးလုံးကျော်ဖြတ်ကြရန်။
(၃) မိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းသည် သူတစ်ပါးကိုလည်း စောင့်ရှောက်ရာမည်ကြောင်း အမှာစကားများပြောကြားခဲ့သည်။
မိမိတို့အနေဖြင့် အသင်း၏(၆)လတာကာလအတွင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအားရပါကြောင်း၊ နောက်ထပ်လည်း ကျန်ရှိနေသော ကော်မတီသက်တမ်းတွင်း ယခုထက်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် အတူတကွပူးပေါင်းကြိုးစားလုပ်ဆောင်ကြရန် တိုက်တွန်းပါကြောင်း စီနီယာကျသော အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းများကလည်း မိမိတို့၏ကြိုးစားဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် အားပေးချီးမွှမ်းသည်ကို ကြားသိရ၍ မိမိတို့နေဖြင့် ဝမ်းသာမိပါကြောင်းနှင့် မိမိတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် တက္ကသိုလ်၏ Website စာမျက်နှာများတွင်ဖော်ပြခြင်းခံရခြင်းများကိုလည်း ဝမ်းမြောက်စွာတွေ့ရပါကြောင်း ပြောကြာခဲ့သည်။
ယနေ့အစည်းအဝေးတွင် အသင်း၏ အသက်သွေးကြောဖြစ်သော ဖွဲ့စည်းပုံ စည်းမျဉ်းများကို ကောင်းသထက်ကောင်းအောင် အပို အလို ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက် ပြဌာန်းအတည်ပြုခဲ့ကြသည်။ လူမှုဆက်ဆံရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးတာဝန်များမှလည်း အသင်းဘဏ္ဍာငွေ စာရင်းရှင်းတမ်းများကို အစီရင်ခံတင်ပြပြီး ဘဏ္ဍာငွေ ထပ်မံရှာဖွေခြင်းနှင့် အသင်းဝင်များအတွက် ပညာရေး ၊ ကျန်းမာရေး၊ အထွေအထွေစသည်များအတွက် အချို့ကျသုံးစွဲမှုတိုကိုလည်း ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြသည် ။
မိမိတို့A.S.M.A အသင်းကြီး၏ (၆) လတာ ကာလအတွင်း အသင်း၏တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်း ဌာနအလိုက် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ၄င်းဌာနမှ ကိုယ်စားပြု တစ်ပါးစီက အသေးစိတ် Powerpoint အသုံးပြုတင်ပြခဲ့ကြသည်။
MCU Leader များအား ဂုဏ်ပြုလက်မှတ် (Certificate)များပေးအပ်ခြင်း
ဆရာတော်ဦးဥတ္တမပွဲ စကားပြောပြိုင်ပွဲတွင် ပထမဆုရသောဆရာတော်အား နာယကဆရာတော် ဦးပညာသာရဗောဓိမှ ထပ်ဆင့် ဆုချီးမြှင့်ခြင်းခဲ့သည်။
အသင်းတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းများကိုလည်း အကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည် အမှတ်တရ စုပေါင်းဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်းစသည် A.S.M.A ၏ အကောင်းဆုံးသော သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုကို ညီညွတ်အားဖြင့် စိုက်ထူခဲ့ကြသည်။
A.S.M.A ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့ ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ ။
၁၅ . ၉ . ၂၀၁၈
ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့၊၏ (၆) လပါတ်အစည်းအဝေးကျင်းပ
10:41 PM Share:
Regular6Monthly Meeting of A.S.M.A held at M.C.U...
ပညာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များ အကျဉ်းချုပ်
ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့၊၏ (၆) လပါတ်အစည...
79th Anniversary Celebration to Ven Ottama, The Li...